10 Qof American Ah Oo Ku Dhintay Toogasho Ka Dhacday Gobolka Texas.
14 Askari Itoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka dhacay gobolka Baay.
Dibax baxyo ka dhan ah Ismaaciil Cumar Geelle oo Jabuuti ka dhacay.
Faransiiska oo ku dhawaaqay in uu dilay Amiirkii Al Qaacidda ee Maqribul Islaami.
Maleeshiyaadka Khaliifa Xiftar oo lagala wareegay Bin Waliid iyo Tarhuuna.
Dhageyso: Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo lagu Falanqeeyay Kacdoonada Ka Socda Mareykanka.
Dalka Baraaziil oo Talyaaniga uga sare maray dhimashada Cudurka Carona Virus.
Saturday May 19, 2018 - 11:24:37 in Wararka by Super Admin
Tobaneeyo qof ayaa ku dhintay kuwa kalane waa dhaawacmeen kadib markii weerar hubeysan oo hor leh uu ka dhacay mid kamida gobollada ugu waaweyn wadanka Mareykanka.
Ugu yaraan 10 qof oo ubadnaa Arday ayaa dhintay kadib markii ruux hubeysan uu toogasho ka geystay iskuul kuyaal degmada Santa Fe ee gobolkaTexas sida ay sheegeen saraakiisha Booliska.
Dad ka badbaaday weerarka ayaa warbaahinta u sheegay in Nin 17 sana jir ah uu qori nuuca shiishka loo adeegsada ah uu ku toogtay ardayda iskuulka waxayna dhimashadu sii caga cageynaysaa 10 qof halka dhaawacu uu toban gaarayo.
Guddoomiyaha gobolka Texase ayaa sheegay in ciidamada Boolisku ay gacanta ku dhigeen dukumiintiyo iyo Miinooyin lagasoo helay guriga ruuxa toogashada geystay oo sida muuqday si heer sare ah uqorsheeyay weerarka.
17 sana jirka dadka ku leeyay dugsiga sare ee Santa Fe ayaa isku dhiibay ciidamda Booliska wuxuuna ka baaqday in uu isdilo kadib markii uu baqay, sida ay caddeynayaan dukumiintiga uu qoray toogtaha waxaa uqorsheysneed in marka uu fal dambiyeedka geysto uu isdilo balse taasi ma dhicin.
Goobta weerarku ka dhacay ayaa 65 KM ujirta Hoostin oo ah magaalada sedaxaad ee ugu weyn uguna dadka badan wadanka Mareykanka.
Dhowr Bilood ka hor oo sanadkaan ah weerar toogasho ah oo ka dhacay gobolka Florida waxaa lagu dilay 17 qof, Donald Trump ayaa war uu soo saaray ku cambaareeyay weerarkan wuxuuna ku baaqay in lahubeeyo shaqaalaha iskuullada si ay uga hor tagaan weerarada nuucaan oo kale ah.
Video: Trump oo ku goodiyay in uu awood u adeegsan doono Dibad baxayaasha iyo Carona oo American hor leh laayay.
Askar Kenyaan ah oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Hoosingoow.
Dad shacab ah oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Xaawa Cabdi.
Al Shabaab oo 8 Askari ku dishay qarax ka dhacay gobolka Sh/hoose.
Boqolaal qof American ah oo markale Carona ugu dhintay dalka Mareykanka.
Wasiirkii deegaanka maamulka 'Puntland' oo udhintay Cudurka Carona.
Sawirro: Sidee looga Ciiday degmada Saakoow ee gobolka Jubbada dhexe.
Kun qof oo maalin qura ku dhintay dagaallo ka dhacay Koonfurta Suudaan.
1539 qof American ah oo Carona ugu dhintay wadanka Mareykanka.
Deegaanka Kuunyo Barroow oo munaasabadda Ciiddul Fitriga si heer sare ah looga oogay.
23/05/2020 - 17:35:51
23/05/2020 - 14:00:49
Daawo Sawiro: Mareykanka oo Carruur iyo Haween ku duqeeyay deegaanka Kuunyo Barroow ee Sh/hoose.
18/05/2020 - 18:29:22
Wariye Reer Galbeed ah : Mareykanka Wuxuu Argagixin ka wadaa Soomaaliya.
09/05/2020 - 10:24:01
Sawirro: Al Shabaab oo soo bandhigtay Meydadka Askar katirsan maamulka 'Jubbaland'.
13/04/2020 - 19:40:02
Sawirro: Suldaankii Beesha Jareer weyne ee lagu dilay Duqeynta Mareykanka oo aas loo sameeyay.
11/04/2020 - 13:21:07
Sawirro: Sidaan ayay diyaaradaha Mareykanka dad Shacab ah ugu xasuuqeen magaalada Jilib.
09/04/2020 - 12:34:34
Sawirro+Codad: diyaaradaha Mareykanka oo dad shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday Koonfurta Soomaaliya.
31/03/2020 - 09:21:34
Sawirro+Codad: Shirweyne ballaaran oo ay isugu Yimaadeen Culimo, Odayaal dhaqan iyo Hoggaanka Al-Shabaab Oo Soo Gabagaboobay.
25/03/2020 - 20:50:39
Sawirro+Codad: Mareykanka oo duqeyntiii Shalay Ku Aabe tiray 10 Carruur ah oo ay Horay Hooyooyinkood U Geeriyoodeen.
11/03/2020 - 09:46:05